सिटिजन्स बैङ्कको एफपीओ बाँडफाँट | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिटिजन्स बैङ्कको एफपीओ बाँडफाँट
on: २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार १७:२४ लगानी
साउन २५, काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेशनलको एफपीओ शुक्रवार बाँडफाँट भएको छ । तोकेभन्दा बढी आवेदन परेपछि गोलाप्रथाबाट भएको बाँडफाँटमा ४६ हजार ३ सय ८२ जनाले १० कित्ताको दरले शेयर हात पारेका छन् भने बाँकी रहेको ६ कित्ता शेयर ६ जनालाई बाँडफाँट गरिएको छ । यस आधारमा ६ जना आवेदकले थप एक कित्ता गरी ११ कित्ता शेयर हात पारेका हुन् ।
विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले दिएको जानकारी अनुसार यस एफपीओमा ६२ हजार ७ सय ९ जनाले ६१ लाख ५ हजार ६ सय ३० कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन दिएका थिए । कुल आवेदकमध्ये ७३ जनाको आवेदन रद्ध भएको छ ।
बैङ्कले संस्थापक र सर्वसाधारण तर्फको शेयर स्वामित्व अनुपात ५१:४९ कायम गर्न साउन १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म प्रिमियम सहित रू. २ सयका दरमा ४ लाख ६३ हजार ८ सय २६ कित्ता एफपीओ विक्री गरेको थियो । एफपीओ बाँडफाँट पश्चात बैङ्कको चुक्तापूूँजी रू. ८ अर्ब ७ करोड ९६ लाख १९ हजार पुगेको छ । बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा बैङ्कको शेयर मूल्य रू. २ सय ३१ कायम भएको छ ।
९ श्रावण २०७५, बुधबार ०९:२५
३ श्रावण २०७५, बिहीबार ०९:०७
३ असार २०७५, आईतवार ०९:१५